नेविसंघका नेताप्रति देउवाको आक्रोश, आपसमा झगडा गरेर संगठन बन्छ, लाज लाग्दैन ? Canada Nepal
नेविसंघका नेताप्रति देउवाको आक्रोश, आपसमा झगडा गरेर संगठन बन्छ, लाज लाग्दैन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको भ्रातृसंगठन नेविसंघका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार नेविसंघ केन्द्रीय समितिले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा देउवाले आफ्ना कार्यकर्ताको झाँको झारेका हुन् ।
उनले आफू आफू लडेर नेविसंघको संगठन नै सिध्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आफू नेविसंघको अध्यक्ष भएकैले चारचोटि देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको भन्दै उनले अहिले कहाँ छ नेविसंघ ? भन्दै रोष व्यक्त गरे ।
आषाढ १९, २०७७ शुक्रवार ०६:०७:०० बजे : प्रकाशित